Mgbasa ozi Podcast na-abịa Afọ | Martech Zone
Friday, February 9, 2018 Satọde, Febụwarị 10, 2018 Douglas Karr
Site na uto enweghị atụ nke pọdkastị na afọ ole na ole, ọ dị m ka ụlọ ọrụ a nwayọ nwayọ imeghari teknụzụ mgbasa ozi na ya. Enweghị obere ihe ma ọ bụ na enweghị ihe kpatara otu usoro mgbasa ozi ahụ mepụtara maka vidiyo enweghị ike itinye n'ọrụ na pọdkastị - ọbụlagodi naanị ịmegharị mgbasa ozi, dịka ọmụmaatụ.
Mgbasa ozi etinyere n'ụzọ di omimi mere ka ọnụọgụ mgbasa ozi ha jiri 51% si na 2015 rue 2016 dịka otu IAB Podcast Ad Revenue Study. M na-atụ anya oge ụfọdụ nke ntinye ntinye. Na algọridim, n'ezie na anyị nwere ike ịzụlite algọridim na na-emechi mgbasa ozi na eke kwụsịtụrụ na ọdịyo faịlụ (mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị mepụtara na ngwọta… Achọrọ m ụfọdụ Ebe E Si Nweta).
Naanị m bipụtara ihe dị ịtụnanya gbara ajụjụ ọnụ na Tom Webster dị ịtụnanya nke Edison Research ebe anyị na-atụle gara aga, ugbu a, na ọdịnihu nke pọdkastị. N'ime ya, anyị na-atụle otu ọwa si eto eto na ndị ahịa. N'ezie, mgbasa ozi Podcast karịrị $ 200 nde n'afọ gara aga, okpukpu abụọ ihe ọ bụ naanị afọ abụọ gara aga dị ka infographic a, Mgbawa Podcast infographic, site na Mahadum Concordia St. Paul Online.
Ndi oru nta akuko ejirila Podcast a too uto na uzo ama nke ama ama, oge ejiri na njem ya na egwu egwu na intaneti. Ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ ụbụrụ na-akpali akpali ma na-eri ahụ nke mmụta ọdịyo, ma ọ bụ ikike ị orụ ntị nke ọtụtụ. Mma dị na overlap. Ikekwe ihe nzuzo pọdkastị bụ na ọ nwere ọtụtụ ọrụ dị mma karịa usoro ọ bụla ọzọ, na-eweta mkpụrụ nke arụpụta n'akụkụ ọ bụla nke usoro ị na-eme kwa ụbọchị.
Ebee ka ndị mmadụ na-ege ntị pọdkastị? Dabere na Midroll
52% nke ndị na-ege ntị na Podcast na-ege ntị mgbe ịnya ụgbọ
46% nke ndị na-ege ntị na Podcast na-ege ntị mgbe ejegharị ejegharị
40% nke ndị na-ege ntị na Podcast na-ege ntị mgbe ịga ije, ịgba ọsọ, ma ọ bụ ịnyịnya ígwè
37% nke ndị na-ege ntị na Podcast na-ege ntị mgbe na -aga n'ụgbọ njem ọha
32% nke ndị na-ege ntị na Podcast na-ege ntị mgbe arụ ọrụ
Nke a bụ nkọwa zuru ezu, Mgbawa Podcast: Ileba Anya na Whonye, ​​Gịnị, na Ihe Mere E ji Kpọọ Usoro Kachasị Mma
Tags: ntinyeMahadum Concordia St. Paul Onlineedison researchIABinfographicntinye Podcastpọdkastị ad na-emefuPodcast mgbasa ozimgbasa ozi Podcastpọdkastị mgbasa oziPodcast na-ege ntịọmụmụ ego Podcastpọdkastịihe ntiwapụ PodcastTom websterolee mgbe ndị mmadụ na-ege ntị pọdkastị
PHP: Jiri WordPress API iji wuo Shortcode iji depụta Subpages